You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / To A Better Health Article Collection / Diseases / Hepatitis B vaccine နဲ့ ပတ် သက် လိုု့ အရေး ကြီး တဲ့ ဗဟုုသုုတ -----
ဖော် ပြ ပါ ထွက် ဆိုု ချက် က အမေရိကန် နိုုင်ငံ CDC website ( Center for disease control and disease prevention ) မှ ဖြစ် ပါ တယ်။
မိမိဘာသာ သွား ဖတ် ကြည့် လိုု့ လဲ ရ ပါ တယ်။
ကျွန်မ က ဘာသာ ပြန် ပေး တာ သာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန်မ ၏ အာဘော် မဟုုတ် ပါ။
1. Are booster doses of hepatitis B vaccine recommended?
ကာကွယ်ဆေးထိုုး ပြီး သူ များ အ တွက် booster dose လိုု့ ခေါ် တဲ့ အင်အားဖြည့် ထပ် ထိုုး သင့် ပါ သလား ?
2 Booster doses of hepatitis B vaccine are recommended only in certain circumstances:
အ ချို့ အခြေအနေ များ အ တွက် သာ လိုု ပါ သည်။
For hemodialysis patients, the need for booster doses should be assessed by annual testing for antibody to hepatitis B surface antigen (anti-HBs). A booster dose should be administered when anti-HBs levels decline to <10 mIU/mL
ကျောက်ကပ်ဆေး နေ ရ သူ များ ဆိုု ရင် နှစ်စဉ် hepatitisB surface antibody ( ဘီပိုုး ခုုခံ အား ) ကိုု သွေး ဖောက် စစ် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
antibody level 10mIU/ml ထက် အောက် လျော့ သွား ရင် booster dose လိုု့ ခေါ် တဲ့ အင်အား ဖြည့် ဆေး ထပ် ထိုုး ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။
အခြားအ ကြောင်း တွေ ကြောင့် ခုုခံ အား ကျဆင်း နေ သူ များ ( HIV , chemotherapy ယူ နေသူ များ၊ transplant လူ နာ များ ) အ ထက် ပါ အ တိုုင်း နှစ်စဉ် သွေး ဖောက် စစ် ပြီး 10 အောက် ကျ သွား ရင် ထိုုး ဖိုု့ စဉ်း စား သင့် ပါ တယ်။
ကာကွယ်ဆေး ထိုုး ပြီး ပကတိ ကျန်းမာ နေ သူ များ အ တွက် က တော့၊ booster dose လိုု့ ခေါ် တဲ့ အင်အားဖြည့် ဆေး ထိုုး ခြင်း မ လိုု အပ် ပါ။
အကြောင်း မှာ ကျန်းမာ နေ သူ များ ဘီပိုုး ကာကွယ်ဆေး ထိုုး ပြီး ပါ က အနည်း ဆုုံး အနှစ် ၂၀ လောက် immunologic memory ရှိ နေ လိုု့ ပါ တဲ့။